China TCRS Series Rotary Separator fanamboarana sy orinasa | Chinatown
Ampiasaina be amin'ny toeram-pambolena, fikosoham-bary, fivarotana serealy ary toerana fanodinana voa hafa
Izy io dia ampiasaina hanalana ny loto maloto toy ny akofa, vovoka sy ny hafa, loto maloto toy ny fasika, masomboly ahitra kely, voamadinika madinidinika ary loto maloto toy ny mololo, hazo, vato, sns. Toetoetra:1.Misaotra ny firafitry ny vy marin-toerana, tsy misy ny hovitrovitra sy ny enta-mavesatra rehefa mandeha ny milina; 2.Ny fananganana tsotra sy vy dia miantoka ny fahamendrehana; 3.Components avy amin'ny mpanamboatra sinoa malaza na marika iraisam-pirenena; 4.Ny rafitra fisarahan-drivotra fanodinana rivotra dia tsy mitaky fametahana fanampiny ny fan, cyclone ary fanadiovana ny rivotra; 5.Ny ambany indrindra amin'ny voam-bary simba izay mahomby tanteraka amin'ny rafitra fanadiovana voa; 6. Fanadiovana mahomby ny voam-bary sy ny voamadinika voaloto amin'ny tsimparifary; 7.Mora tokoa ny manova ny zoro amponga manomboka amin'ny 1о ka hatramin'ny 5о; 8.Kind ny habeny ho an'ny fanokafana sivana novokarina dia mety amin'ny karazana akora sy ny fampiasana isan-karazany ny milina; 9. Maodely matotra iray amin'ireo mpampisaraka amin'ny famokarana ilaina mba ahafahana misafidy ny safidy tsara indrindra ho an'ny fanadiovana voamadinika.
Lisitra Parameter teknika:
Ny herin'ny electromotor dia aseho amin'ny fametrahana ny Separator miaraka amin'ny tsingerin'ny rivotra ASO mihidy
Ny herin'ny electromotor dia aseho amin'ny fametrahana ny Separator miaraka amin'ny tsingerin'ny rivotra ASR Fanamarihana: Tokony hanana ny zonay hanova ny atin'ny katalaogna isika raha misy fampandrenesana mialoha.
Rafitra fanamainana mandeha ho azy